Mino Raiola Xiddig Cajiib Ah Ku Qal-Qaalinaya In Uu Ku Soo Biiro Man United – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Mino Raiola Xiddig Cajiib Ah Ku Qal-Qaalinaya In Uu Ku Soo Biiro Man United
Mino Raiola Xiddig Cajiib Ah Ku Qal-Qaalinaya In Uu Ku Soo Biiro Man United
Wakiilka caanka ah ee Mino Raiola ayaa si joogto ah uga wada hadli jiray saxiixyada suuqa kala iibsiga sanadihii ugu dambeeyay xilli wakiilka caanka ah uu saxiixyo u soo gacan galiyay Red Devils labadii suuq ee ugu dambaysay.
Kadib bixitaankii David Moyes iyo Louis Van Gaal Kooxda Man United ayaa si weyn ugu tiirsanayd Raiola labadii sano ee ugu dambaysay.
Wakiilka reer Italy ayaa noqday qofka u soo iibiya xiddigaha kooxda Maadaama uu u soo xero galiyay xiddigaha Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Romelu Lukaku & Henrikh Mkhitaryan kuwaas oo Old Trafford ka soo dagay iyaga oo uu wakiil u yahay Raiola.
Raiola ayaa lacag dhan 41 milyan oo euro ka helay heshiiskii uu Paul Pogba ugu keenay Old Trafford sida ay muujinayaan warqado FA-ga ah.
Sida laga soo xiganayo wargayska Corriere dello Sport Raiola ayaa mar kale ku rajo weyn in uu u soo xero galiyo xiddiga 100 milyan lagu qiimeeyo ee Mauro Icardi.
Mauro Icardi oo 24 jir ah ayaa dhaliyay 18 gool 24 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkan laakiin qaab ciyaareedkii Inter Milan ayaa istagay kadib bilo ay qaab cajiib ah ku bilowdeen horyaalka.
Xiddiga reer Argentine ayaa kooxda Inter Milan kula jira heshiis ilaa 2021 ah laakiin Nerazzurri ayaa ka shaqaynaysay in ay heshiis cusub ka saxiixato iyada oo xaaskiisa iyo wakiilkiisa Wanda Nara ay doonayaan in uu xiddigu saxiixo heshiis uu sanadkii ku qaadanayo 7 milyan oo euro.
Si kasta ha ahaatee xiddiga reer Argentine ayaa doonaya in uu ka helo lacag ka badan intaas halka uu sidoo kale ku xiray in ay u soo baxdo champions league xilli ciyaareedka dambe.
Raiola ayaa lagu soo waramayaa in uu doonayo in uu xiddigu xiisaynayo in uu jawiga badasho oo uu koox kale u ku biiro laakiin loo sheegay in uu Icardi wax yar xiiso u qabo in uu ka tago kooxda.
Si kasta ha ahaatee Raiola ayaa tan ilaa wakhtigaas ka shaqaynaysa sidii uu kabtan kooxda Inter Milan u keeni lahaa premier league.